လှပပြီးလက်တွေ့ကျသောလက်စွဲယိုကော်ဖီထုတ်လုပ်သူများ | Bezzia
မာရီယာ vazquez | 06/04/2021 12:00 | မီးဖိုခန်း
ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်နံနက်ခင်းသို့မဟုတ်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ပျော်မွေ့ရန်နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ရန်အတွက်ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့မှာများစွာသောရွေးချယ်စရာတွေရှိတယ် လက်စွဲယိုကော်ဖီထုတ်လုပ်သူ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်နူးညံ့သောကော်ဖီတစ်ခွက်ရရှိရန်အကောင်းဆုံးသော်လည်းအရသာများစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လှပပြီးလက်တွေ့ကျပြီးကြိုးမဲ့စနစ်၊ ဤနည်းဖြင့်လက်ဖြင့်ယိုကော်ဖီပြုလုပ်သူများသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Bezzia တွင်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ကော်ဖီမြေပြင်ထားခြင်းနှင့်ရေပူကိုလက်ဖြင့်သွန်းလောင်းခြင်း၊ ကော်ဖီသောက်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်များဖြင့်ထည့်ထားသောစစ်ထုတ်စက်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ Melitta, Chemex သို့မဟုတ် Hario၊
ရာစုနှစ်များစွာကတည်းကမြေအောက်ကော်ဖီကိုရေအိုးတစ်လုံး၌အပူပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ဒီကော်ဖီစက်တွေကဒီအနှစ်သာရကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးကော်ဖီရဲ့နောက်ဆုံးအရသာကိုတိုးတက်စေတယ်။ သုံးစွဲရလွယ်ကူပြီး၎င်းတို့တွင်လည်းရှိသည် အခြားကော်ဖီဖျော်စက်အမျိုးအစားများထက်အားသာချက်များစွာရှိသည်။
သူတို့ကလှတယ် သူတို့ကအပေါ်အကြီးကြည့်ရှုပါ မီးဖိုချောင်ကောင်တာ.
Melitta ကိုစတင်တည်ထောင်သူက ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင်ကော်ဖီစစ်ခြင်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်ကိုသင်သိပါသလား။ နောက်ပိုင်း, 1908 ၌တည်၏ Melitta Bentz သည် conical filter များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် ၎င်းသည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောproducingရိယာကိုထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကော်ဖီ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသောစစ်ထုတ်စက်များသည်ကုမ္ပဏီ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Melitta ကတ်တလောက်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ် ပလတ်စတစ်, ဖန်နှင့်ကြွေ filter ကိုကိုင်ဆောင်သူ မျှမျှတတကော်ဖီထုတ်ယူသေချာကြောင်းဆန်းသစ် groove အတူ။ ထို့အပြင်၎င်းဖွင့်ပွဲနှစ်ခုကကော်ဖီသောက်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောအားဖြင့်မျှဝေရန်သင့်အားခွင့်ပြုမည်။ ဒီဟာကိုသင့်အတွက်ယူရို ၁၇ ထက်မပိုပါဘူး။
Melitta Pour Over ဖန်ခွက် Carafe နှင့်အတူ portafilters သည်ယနေ့သင့်အားဆက်လက်ခွင့်ပြုထားသည် ကော်ဖီကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ လူအတော်များများသည်။ Carafe သည် Borosilicate ဖန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပျက်စီးခြင်းအန္တရာယ်မရှိဘဲပူသို့မဟုတ်အအေးအရည်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အတွက်သင့်တော်ပြီးဖြုတ်တပ်နိုင်သည့်အဖုံးကြောင့်ပန်းကန်ဆေးစက်တွင်အလွယ်တကူဆေးကြောနိုင်သည်။
အထင်ကရ Chemex ဖန်ဘူးကို ၁၉၄၁ တွင်ဂျာမန်ဓာတုဗေဒဓာတုဗေဒပညာရှင် Peter Schlumbohm မှတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏သန့်ရှင်းပြီးရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း မည်သည့်ကောင်တာထိပ်တွင်မဆိုကြည့်နိုင်သည်။ သစ်သားလက်ကိုင်ပါသည့်ပုံစံသည်အထူးသဖြင့်အထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးဒီဇိုင်းကိုနွေးထွေးစေသည်။ ၎င်းသည်အပူပေးသောဖန်ခွက်ကိုကိုင်ဆောင်ထားစဉ်သင့်အားမီးမရှို့နိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးသည်။
လက်ကိုင်ကော်ဖီထုတ်လုပ်သူများသည်ခွက်သုံးခွက်မှ ၁၃ ခွက်အထိထုတ်လုပ်ရန်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပြီးတော့၎င်းရဲ့ဖိုင်ဘာစစ်ထုတ်ကိရိယာများ၏ဒီဇိုင်းသည်အထူးဖြစ်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုထက်ပိုထူ ခါးသောဒြပ်စင်များ၊ အဆီများနှင့်အစေ့များကိုသင်၏ခွက်ထဲမှထုတ်ပစ်ရန်။
Hario ကို ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင်တိုကျို၌စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမူလကဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက်ဖန်ထည်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သင်၏လူကြိုက်အများဆုံး V60 ကိရိယာ၊ ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကတည်ရှိခဲ့သော portafilters များကိုတိုးတက်စေရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ 60ºထောင့်ဖြင့်ရေသည်ကြိတ်၏ဗဟိုဆီသို့စီးဆင်းသွားပြီးအဆက်အသွယ်အချိန်ကိုကြာရှည်စေသည်။
ဤသည် carafe နှင့်ကန်တော့ချွန်အစုံ ကော်ဖီစစ်စစ်ဖြစ်စေရန်သင့်တော်သောစျေးနှုန်း (၂၅ ဒေါ်လာ) ဖြင့်အိမ်တွင်ကော်ဖီကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်ကုမ္ပဏီ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုသာသင်လိုက်နာရမည်။
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင်ရွေးချယ်သည့်ကော်ဖီဖျော်စက် \_ t ကော်ဖီပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းသည်အလွန်ဆင်တူလိမ့်မည် အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရှိရန်လိုအပ်သောကော်ဖီနှင့်ရေအချိုးကိုသာကွဲပြားသည်။ filter ကိုရေပူဖြင့်အအေးပေးခြင်း၊ မြေဆီလွှာကော်ဖီအားအလေးချိန်ချိန်ခြင်းနှင့်၎င်းကို filter ထဲ၌အညီအမျှဖြန့်ဝေခြင်းတို့သည်လိုက်နာရမည့်ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။
ပြီးရင်ရေကိုအပူပေးပြီး gooseneck ဘူးထဲထည့်လိုက်ရုံပဲ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသင့်ကိုရေပူထည့်ဖို့ပိုလွယ်ကူလာလိမ့်မယ် မြို့ပတ်ရထားလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကော်ဖီကျော် အလယ်ဗဟိုကနေအပြင်ဘက်အထိ။ ရေ၏အပူချိန်ကိုလည်းအရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည် ၉၀ ကနေ ၉၄ ဒီဂရီကြားမှာရှိတယ်။ အကယ်၍ သင့်တွင်သာမိုမီတာမရှိပါက ၄ င်းပြုတ်ပြီးနောက်စက္ကန့် ၄၀ ခန့်ခုန်လျှင်သင့်အတွက်လုံလောက်ပေလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » မီးဖိုခန်း » လှပပြီးလက်တွေ့ကျသောလက်စွဲယိုကော်ဖီထုတ်လုပ်သူများ
Netflix ပေါ်ရှိ 'Ginny and Georgia' ဇာတ်လမ်းတွဲ၏အောင်မြင်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်
ဆန်နှင့်အတူ tofu နှင့်ပန်းဂေါ်ဖီဟင်း